Nagarik News - बौद्धमार्गी र हिन्दूको एउटै देउता
Friday 17 Baishak, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	नागरिक शनिबार	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / नागरिक शनिबार / बौद्धमार्गी र हिन्दूको एउटै देउता
बौद्धमार्गी र हिन्दूको एउटै देउता	29 Jun 2013 १५ असार, २०७०
राजु नेपाल	Be the first to comment! 12345 (1 Vote)
खोटाङको हलेसी महादेव नेपालका प्रमुख तीर्थस्थलमध्ये एक हो। हिन्दु पुराणअनुसार महादेव र भस्मासुरसँग जोडिएका कथासँग हलेसी सम्बन्धित छ भने बौद्ध धर्माबलम्बीको पनि उत्तिकै नाता छ। बौद्ध, लुम्बिनी, स्वयम्भू र मुक्तिक्षेत्रजस्ता ठाउँमा हिन्दु र बौद्धमार्गी एकै ठाउँमा गएर पूजा गरेको हामीले देखेका छौं। तर, नेपालमा केही यस्ता धार्मिकस्थल छन् जो भगवान् शिवसँग जोडिएका छन् र बौद्धमार्गीको पनि त्यही शिव मन्दिरमा भीड लाग्छ। त्यसमध्ये हलेसी महादेव पनि एक हो। हलेसीको दूरी काठमाडौंबाट त्यति टाढा नभए पनि बाटोको अवस्था, सिजनल बाटा र सधैं सवारीसाधन नपाइने हुँदा धेरै टाढाजस्तो लाग्छ। काठमाडौंबाट त्यहाँ पुग्न दुइटा मोटर बाटा छन्। एउटा, मुख्य पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सिराहाको मिर्चैया पुगेर त्यहाँबाट २६ किमि यात्राबाट कटारी पुग्ने अनि ४६ किमि कच्ची बाटोबाट घुर्मी हुँदै जाने। अर्को, धुलिखेल हुँदै बीपी राजमार्गबाट फुर्कोटसम्म करिब १२० किमि यात्रा पूरा गरेर त्यहाँबाट अर्को ६० किमि यात्रा गरी घुर्मी पुगेर जाने। धुलिखेलबाट जाँदा नेपालथोकदेखि फुर्कोटसम्मको २८ किमि बाटो निर्माणाधीन भएकाले वर्षायाममा गाह्रो हुन्छ भने फुर्कोटबाट घुर्मीसम्म ६० किमि बाटो कच्ची छ। ठाउँ–ठाउँका खोलामा पुल नभएकाले वर्षामा यो बाटोबाट पनि मोटर चल्न सक्दैन। कटारीबाट घुर्मीसम्म भने सधैंजसो सवारी साधन चल्छ। उदयपुरको घुर्मी बजार पुगेपछि यात्रा अझ रोमान्चक हुन्छ। सुनकोसी नदीको तीरमा बसेको घुर्मी बजारले आज पनि सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र खोटाङको व्यापारिक केन्द्रको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। जब बाटो राम्ररी बन्छ, तब यो ठाउँ प्रभावकारी हुन सक्छ। घुर्मीबाट सुनकोसी पार गर्र्न सरकारले निःशुल्क फेरीको व्यवस्था गरेको छ। बिहानदेखि बेलुकीसम्म फेरीमा मान्छे र गाडी तारेर ओखलढुंगाको हर्कपुर पुर्या उने काम रमाइलो देखिन्छ। वर्षायाममा जब फेरी चल्दैन त्यो बेला मोटर यताउता गर्न सक्दैनन्। मान्छेका लागि भने अलिमाथि झोलुंगे पुल बनाइएको छ। हर्कपुरबाट करिब १७ किमि यात्रा गरेर जयरामघाटसम्म पुग्न सकिन्छ। बाटो निर्माणाधीन भए पनि त्यति अप्ठ्यारो छैन। ठाउँ–ठाउँमा कालो पत्रे गरिएको छ।जयरामघाटबाट दुधकोसी तरेर हलेसीतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। अरू बेला सजिलै बेलीब्रिजबाट सवारी साधन उता लान सकिए पनि वर्षायाममा भने बेलीब्रिज निकालिने हुनाले सवारी साधन यतै राखेर झोलुंगे पुल तरेर जानुपर्छ। बल्ल खोटाङ जिल्ला सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट उकालो चढ्दै ३२ किमि बाटो गएपछि हलेसी पुगिन्छ। बाटो ठाउँ–ठाउँमा बिग्रे पनि त्यति नराम्रो छैन। जति माथि चढिन्छ, तलको गर्मी बिर्सिन्छ र रमाइलो दृश्यले मन पुलकिन बनाउँछ। हलेसीमा खान/बस्न मन्दिरवरपर राम्रा होटल छन्। सानो बजार भइकन पनि भगवानको मन्दिर भएकाले त्यति महँगो पनि छैन। सुनकोसी र दुधकोसीमा पुल नभकाले र धेरैपटक गाडी फेर्नुपर्छ। यात्रा थकानपूर्ण र लामो पक्कै हुन्छ। कति बेलामा त यो २३० किमिको यात्रा एकैदिनमा तय नहुन सक्छ। त्यसकारण कतिपय तीर्थयात्री घुर्मीमा एकरात बसेरमात्र हलेसी जान्छन्। हलेसी महादेवको वर्णन पुराणहरूमा पाइन्छ। पुराणअनुसार, जब भस्मासुरले महादेवबाट जसको टाउकोमा हात राखे पनि त्यो भस्म हुन्छ भन्ने वरदान पायो तब महादेवकै टाउकोमा हात राख्न खोज्दा महादेव त्यसबाट बच्न ठूलो गुफाबाट भागेर अर्को गुफामा छिरेँ, त्यही ठाउँ नै हलेसी हो। महादेवले त्रिशुलले गुफा फोडेर बाहिर निस्केको ठाउँलाई व्यास गुफा भनिन्छ। गएर बसेको गुफामा चाहिँ महादेवको 'शिव लिंग' छ। त्यहाँ मुख्य पूजा हुन्छ। त्यस्तै जन्मद्वार, कर्मद्वार, पापद्वार र धर्मद्वारमा छिर्नुपर्ने किंवदन्ती र मोटा मान्छेलाई ती द्वारबाट छिर्न हुने अप्ठ्यारोले यात्रालाई रमाइलो बनाउँछ। सन्तान नहुनेले जन्मद्वारमा गएर सन्तानको वर माग्दा मिल्छ भन्ने जनविश्वास छ। पार्वतीको मूर्ति पूजा नगरी सबै फल प्राप्त हुन्न भन्ने मान्यता रहेकाले सबै भक्तजन गुफाको माथिल्लो भागमा रहेको पार्वतीको पूजा धुमधामले गर्छन्। गुफाबीचमा रेहेको शिवलिंग अरू शिवालयमा रहेको लिंगभन्दा फरक छ। वरिपरि फलामे बार लगाइएकाले लिंगलाई छोएर पूजा गर्न भने पाइँदैन।लामो र पुरानो गुफा भएकाले गुफाभित्र हजारौंका संख्यामा चमेरा देखिन्छन्। तिनको आवाजले वातावरणलाई फरक बनाउँछ।एकातिर हिन्दुका आराध्यदेव महादेवको यो कथा छ भने अर्कोतिर त्यही गुफा र स्थानसँग बौद्धमार्गीको पनि आफ्नै कथा जोडिएको छ। रिम्पोछे र राक्षससँग जोडिएका धेरै कथाले गर्दा हलेसी दर्शन गर्न नेपाल, भुटान अनि तिब्बतबाट वर्षेनि हजारौं धार्मिक पर्यटक हलेसी आउँछन्। यस्तो संयोग कम मन्दिरमा मात्रै देखिन्छ। दुवै धर्मावलम्बीले उत्तिकै श्रद्धासाथ मान्ने हुँदा हलेसी मन्दिरभन्दा पनि हलेसी गुफाको नामले यो ठाउँ प्रख्यात छ। सँगै रहेको गुम्बामा पनि त्यहाँ पुग्ने हिन्दुले दर्शन गर्न छुटाउँदैनन्। Tweet Leaveacomment Message *
गुणस्तरीय शिक्षाका तगारासामुदायिक स्कुलका शिक्षकको जागिर पक्का छ। तलब सुविधा राम्रो छ। पेन्सन निश्चित छ। ९५ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन्। निजी स्कुलमा कहिले जागिर जान्छ टुंगो छैन। पर्याप्त तालिम छैन। तलब...	पात्रहरूसँगै दमिनी भीरमा'दमिनी भीर' बजारमा आएदेखि नै धौले कान्छोले पटकपटक 'गाउँ आउन' भनिरहेकै हो। काठमान्डुको व्यस्तता वा व्यस्तताको बहाना देखाउँदै मैले कान्छोलाई टार्दै आइरहेको थिएँ। आख्यान बुन्न त्यत्रो तागत दिने एक महत्वपूर्ण...	सलकपुरको शान‘आन्टी, जिब्रो पर्पर्‍याउने चटपटे दिनुस न,' पारिलो घामले निधारबाट झर्न लागेका पसिना पुछ्दै चाँदनी तिर्कीले मेचीखोला किनारमाथिको फाँटमा अस्थायी दोकान फिँजाएकी साहुनीलाई आग्रह गरिन्, ‘पिरो र अमिलोचाहिँ बढी है!' यति...	बहादुर लेखकनामको पछाडि 'बहादुर' सुनेकै भरमा मानिसहरू ठान्दा रहेछन्– उनी नेपाली हुन्, पुरुष हुन्। भारतीय मूलकी अमेरिकी लेखक/समीक्षक गायत्रा बहादुर भने न त नेपाली हुन्, न त पुरुष। उनले नेपालको नाममात्र...	प्रकृतिको काखमा ओख्रेनीएफएम सुनिरहेका कुखुरा! संगीत सबैलाई मन पर्छ। वनस्पति र जीवजन्तुलाई पनि। त्यसैले त दाबा शेर्पाको खोरमा रेडियो घन्कन्छ। साउन ३ गते सुन्दरीजलमाथि मुलखर्क पुग्दा शेर्पाको खोरमा एफएम बजिरहेको थियो।	मेरो पहिलो पुरस्कारमैले जीवनमा पहिलो आकाशवाणी पाएँ। लेखिएको थियो, 'तु आउनु... एक जोर दौरासुरूवाल ल्याउनू...।'पोखराको आवा कार्यालयका कुनै एक कर्मचारीले दिएर गए, अहिले मलाई सम्झना छैन। सम्झना त मलाई हिजोआजका बैङ्क भौचरजस्तो...	प्रतिशोधमा अमर्त्य सेनभारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन अगावै विशेष चर्चा पाएको पुस्तक हो, 'द कन्ट्री अफ फर्स्ट बोइज'। सन् १९९८ मा अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनको हालसालै प्रकाशित उक्त पुस्तक चर्चामा छ। भएको...	हिस्साआन्दोलनको क्रममा जिल्ला बन्दको घोषणा गरिएको थियो। बन्द सफल पार्न पार्टीका युवा कार्यकर्ताहरू बजार बन्द गराउँदै हिँडेका थिए। ठाउँठाउँमा जुलुस पनि निकालिएका थिए। ऊ पनि त्यस्तै एउटा जुलुसमा मिसिएको थियो।...	नागरिक शनिबार	धौलागिरिमा... सके गुन तिरौंला नत्र फिरिमापहाडी भेकतिर जाँदा बिउँझने वित्तिकै झयालको पर्दा खोल्छु म। बाहिर हेर्छु, हिमाल खुल्यो कि भनेर। त्यो...	नयाँ स्कुलचंखे खरायोकी आमाले गाँजरको हलुवा बनाएर राखेको निकै बेर भइसकेको थियो । चंखे खरायोलाई गाँजरको हलुवा...	जङ्गबहादुरको मन्दिरदरबार परिसरमा रहेको निजी मन्दिरको दर्शन पश्चात् निस्किए जङ्गबहादुर, यात्रामा। बेलाइत–यात्रा!राणाकालका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको विदेशयात्रा। महत्वपूर्ण...	पाठकको आँखामा तापसंयोगको कुरा मैले शारदा शर्माको 'ताप' उपन्यास पढ्दै गरेको बिहान 'नागरिक'को पृष्ठमा सुशील कोइरालाको अवसानको खबरसँगै...	भर्खरै...
जेष्ठ नागरिक लुट्ने गिरोह पक्राउ
नितम्ब प्रत्यारोपण गराउनेहरु अधिकांश गाउँले
संसद् नियमावली पारित गर्नेबारे सहमति जुटाउन देउवा र घर्तीबीच भेटवार्ता
दाहाल-वैद्य एकीकरण होला?
घट्टेकुलोमा शौचालयभित्र शव भेटियो
हरिसिद्धिमा भारतीय ट्रकककाे ठक्करबाट स्थानीय युवककाे मृत्यु
छुटाउनु भयो कि	निजीको छात्रवृत्तिमा नेताका फोनकाठमाडौं-'हेलो सर, म नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य बोलेको, मेरा आफन्तको छोराका लागि पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति सिफारिस...	अर्बाैं बेहिसाबः चरम अपारदर्शी बने एनजिओ/आइएनजिओवैशाख-शुक्रबार सिन्धपाल्चोक, नवलपुर पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडी भूकम्पपीडितका गुनासाले घेरिए ।उनीहरूले सरकारभन्दा पनि एनजिओ-आइएनजिओमाथि...	कोरिया जान सयौं मिटर लामो लाइन, युवालाई सास्ती (फोटो फिचर)काठमाडौं– 'भोलि त बिहान सबेरै उठेर परीक्षा फारम भर्न जानु छ,' गोरखा बुंकोट–६ घर भई डल्लु...	क्रिकेट संकट टार्न विवादित पक्ष लचिलोकाठमाडौं-अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) बाट निलम्बनमा परेपछि विवादमा रुमल्लिइरहेको नेपाली क्रिकेट थप अन्योलमा धकेलिएको छ ।...	क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बितकाठमाडौं-अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आसिसी) ले सोमबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निलम्बनलाई औपचारिकता दिएको छ ।आइसिसी...	Nagarik News